Thenga i-Bitcoin eNigeria Ngoko nangoko nangokuKhuselekileyo | Paxful
Thenga uze uThengise i-Bitcoin (BTC) e-Nigeria
Khusela imali yakho kwi-Naira eyehlayo uze ukhusele ikharensi yakho nge-Bitcoin. Thenga i-Bitcoin ngalo naluphi ukhetho lokubhatala kuquka Ikhadi Lesipho le-Amazon, Ikhadi Lesipho lee-iTunes nangodluliselo-mali lwaseBhanki!
Ingaphezu kwe 1000 i-Bitcoin esele ithengisiwe e-Nigeria!
Bukela ividiyo yethu efundisa ngendlela elula yokuthenga i-Bitcoin
I-MTN Mobile Money
Ngoko nangoko—I-ID ingafuneka
Ngoko nangoko—Elona xabiso
Cofa apha ukuze ubone lonke ukhetho
Zingaphezu kwe 300 iindlela zokubhatala
Zama enye indlela yokubhatala
300 iindlela zokubhatala
1. Khetha indlela yokubhatala kwicala lasekhohlo
1. Khetha indlela yokubhatala kwezi zingasentla
Khetha kwiindlela zokubhatala eziphezulu e-Nigeria. Okanye ufumane nayiphi na enye indlela yokubhatala kukhetho olulapha ngezantsi lweendlela zokubhatala eziphezulu.
2. Tayipha imali yakho
Ungathenga i-Bitcoin ngeendlela eziliqela
Thenga i-Bitcoin Ngamakhadi Esipho
Landela le miyalelo
1. Hamba uyothenga amakhadi esipho ngemali kwivenkile yakho yasekuhlaleni njengase- Blessings Computer okanye e- Konga.com.
2. Khetha le ndlela yokubhatala ingasentla uze utayiphe ukuba ingakanani imali onayo kwikhadi wandule ucofe ku "Thenga i-Bitcoin ngoku". Ibrawuza entsha iza kuvuleka inexabiso elikhethwe ngu-Paxful (elona xabiso ligqibeleleyo).
3. Funda imimiselo yexabiso uze uqalise urhwebo. Uplowuda imifanekiso esemva kwikhadi likhuhliwe kunye nerisithi. Qiniseka ulenze lalungela ukusebenza ikhadi kuqala! Cofa kwiqhosha elithi "Ndiyilandele imiyalelo" uze ulinde akhulule i-Bitcoin.
Thenga ngamakhadi esipho
Thenga i-Bitcoin Ngodluliselo-mali Lweebhanki Zikazwelonke
1. Khetha Udluliselo-mali Lweebhanki Zikazwelonke uze utayiphe imali ofuna ukuyisebenzisa apha ngasentla. Umthengisi uza kukunceda ufake imali kwiwalethi yakho yeBitcoin yakwa-Paxful.
2. Landela imiyalelo yokudlulisela imali isuka kwiakhawunti yakho yasebhanki iye kumthengisi. HAYI NGOBHATALO OLUKHAWULEZAYO KWI-TELLER, HAYI NGODLULISELO-MALI KWI-ATM.
3. Emva kokuba udluliselo-mali lwenziwe, Cofa kwiqhosha elithi "Ndiyilandele imiyalelo" uze ulinde akhulule i-Bitcoin.
4. Ii-Bitcoin zibakho ngoko nangoko kwiwalethi yakho yakwa-Paxful ibe zingathunyelwa naphi na emhlabeni ngoko nangoko.
Thenga ngodluliselo-mali lwebhanki
Thenga ngo-Western Union /ngo-MoneyGram
1. Khetha i-Western Union okanye i-MoneyGram uze utayiphe imali ofuna ukuyisebenzisa apha ngasentla. Umthengisi uza kukunceda ufake imali kwiwalethi yakho yeBitcoin yakwa-Paxful.
2. Landela imiyalelo yokudlulisela imali. Kungafuneka ulinde ithuba elide xa usebenzisa i-Western Union kodwa umthengisi wakwa-Paxfulki akalindi.
U-Paxful yiplatfomu ye-Bitcoin Yomhlobo Kumhlobo inxibelelanisa abathengi kunye nabathengisi. Vele nje ukhethe indlela ofuna ukubhatala ngayo uze utayiphe ukuba ufuna i-Bitcoin engakanani.
Eyona njongo yethu kukunika abantu abasebenzayo iplatfomu elula, enobulungisa nekhuselekileyo ukunika ixabiso loko bakusebenzelayo. Ixesha elininzi iingxaki zethu zinento yokwenza nemali, ukuyifumana nokuyihambisa. Sizinikele ekuvuleni amandla abantu ngokwakha iplatfomu yohambiso-ntlawulo yomhlobo kumhlobo yehlabathi lonke yekamva. U-Paxful ngu-PayPal + u-Uber ne-Wall Street yabantu abaqhelekileyo.
Nceda ama-Nigeria afumane i-Bitcoin uze ufumane iingeniso EZINKULU ezifikelela kwi 60% kwintengiso nganye. Qalisa ukuthengisa ngeakhawunti yakho yebhanki yase-Nigeria ngoku, jonga isikhokelo sethu sasimahla. U-Paxful ufumana amawaka abathengi be-Bitcoin abasuka e-Nigeria mihla le.
Unabantu abaninzi obaziyo abafuna ukuthenga i-Bitcoin e-Nigeria? Nge Kiyoski ye-Bitcoin nenkqubo yeQabane ufumana umvuzo 2% kurhwebo ngalunye ngonaphakade ngokwabelana nje ngelinki. Qalisa ngoku.
I-Bitcoin yinto exabisekileyo yedijithali kwaye ikwayindlela yokubhatala. U-Paxful wenza kube lula ukutshintshela amakhadi esipho akho abe yi-Bitcoin aphinde ayeke ukuba yiBitcoin. I-Bitcoin iye yayinto exabisekileyo kwihlabathi lethu ledijithali. Ungayigqala njengegolide ekuhlobo lwe-intanethi. Njengegolide, ixabiso le-Bitcoin lihla linyuka kwaye kulindelekile ukubona ukukhula okuzinzileyo kwixabiso le-Bitcoin, ingakumbi xa iimeko zezoqoqosho zingazinzanga.
Emva kokufumana i-Bitcoin ungenza nantoni na oyifunayo. Unokhetho lokuyigcina kwiwalethi yakho yakwa-Paxful, uthengise i-Bitcoin uze ufumane iidola zase-US okanye ngayo nayiphi enye ikharensi. Futhi i-Bitcoin yakho ungayithumela kuyo nakweyiphi na enye iwalethi ye-Bitcoin.
Ungayisebenzisa kwintoni i-Bitcoin?
Ukuze ubone uluhlu lwabarhwebi abayamkelayo i-Bitcoin yiya ku https://spendabit.co/merchants.
Sebenzisa i-Bitcoin kwiinzala-mali zakho
Kungcakazo - BitCasino
Kwii-elektroniki - NewEgg
Jika i-Bitcoin ibe yimali nge-Bitcoin ATM ekufutshane nawe - Imaphu ye-Bitcoin ATM
Iplatfomu entsha ye-Bitcoin ingqalelo yayo ise-Nigeria
Ukuthenga nokuthengisa i-Bitcoin kwenziwe kwalula ngu-Paxful
Iinkampani ezinkulu zamkela i-Bitcoin